Shaqaalaha dekedda Berbera oo dhigay dibadbax ka dhan ah shirkadda DP World – Balcad.com Teyteyleey
Shaqaalaha dekedda Berbera oo dhigay dibadbax ka dhan ah shirkadda DP World
Shaqaalaha Dekedda Berbera ayaa dhigay dibadbax ay uga horjeedaan maamulka shirkadda DP World ee laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta, kuwaasi oo ka cabanaya tacadiyo uu kula kacay maamulka shirkadaasi ee Dowladda Somaliland ay ku wareejisay dekedda.
Guddoomiyaha Muruqmaalka Dekedda Berbera Ciise Cali oo Saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in muddo laba toddobaad ah ay ka maqan tahay lacagihii ay shaqeysteen oo toddobaadkiiba maalinta Arbacada ah qaadan jireen.
“Markii aan u tagnay ninka mas’uulka ka ah maamulka Shirkadda DP World wuxuu nagu yidhi anigu halkaan waan iibsaday ee iska taga” ayuu yiri Ciise Cali oo sheegay inay ku guul darreysteen dadaallo ay u galeen sidii ay ku heli lahaayeen lacagta ka maqan.
Waxa uu sheegay in arrintaasi uu ka dambeeyo ninka xisaabiyaha u ah shirkadda DP World ee laga leeyahay wadanka Imaaraadka Carabta, wuxuuna Guddoomiyaha muruqmaalka Dekedda Berbera uu sheegay in ninkaasi uu faragelin ku hayo shaqaalaha xoogsatada ah.
Shaqaalaha ayaa iyagoo aad u careysan waxay isugu soo baxeen afaafka hore ee Dekedda, iyagoona ku qeylinayay ereyo ka dhan maamulka Shirkadda DP World isla markaana ku hanjabay haddii aan cabashadooda di degdeg ah wax looga qaban ay qaadayaan tallaabooyin kale.
The post Shaqaalaha dekedda Berbera oo dhigay dibadbax ka dhan ah shirkadda DP World appeared first on Ilwareed Online.
Afhayeenka Al-Shabaab Sheekh Cali Dheere iyo xubno sarsare oo lagu dilay weerarkii Kunya Barrow